२० हजारको उपचारका लागि डेढ लाख भाडा तिर्नुपर्ने ! - Arthatantra.com
२० हजारको उपचारका लागि डेढ लाख भाडा तिर्नुपर्ने !
गोरखा । बिरामी सुत्केरीलाई उपचारका लागि काठमाडौं लैजान चार्टर्ड गरिएको हेलिकोप्टर सोमबार दुर्घटना हुँदा सिर्दिबास २ का पाँचसहित सातजनाको मृत्यु भयो। बिरामीले उपचार पाउन त पर, सातजनाले व्यर्थै जीवन गुमाउनु पर्यो।
तीन दिनअघि गत शुक्रवार सिर्दिबास ९ न्याकका लक्षेन्द्र गुरुङ र फूलमाया गुरुङलाई एक लाख ३० हजार खर्च गरेर हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरी काठमाडौं लगियो। उनीहरुको अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
त्यसभन्दा केही दिनअघि सोही गाउँका दुई महिलालाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो। १५ दिन काठमाडौंमा उपचार गर्दा २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बिरामीको हेरचाह गर्दै आएकी कुमारी गुरुङले बताइन्।
त्यसभन्दा केही दिनअघि ल्हो गाविसका दुईजना घाइतेलाई पनि एक लाख ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिथरेर हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं लगिएको थियो। केही दिनको उपचारपछि उनीहरु घर फर्किसकेका छन्।
सुत्केरी हुँदा हातले सालनाल झिकेका कारण इन्फेक्सन भएर सिकिस्त भएकी बिही २ की पासाङ साङ्मोलाई उपचार गर्ने हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरी काठमाडौं लगियो। एक लाख ४० हजार रुपैयाँ हेलिकोप्टर खर्च गरी प्रसूतिगृह पुर्याइएकी पासाङ निशुल्क उपचार गरेर घर फर्किइन्। न्याकमा अहिले पाँचजना बिरामी छन्। हेलिकोप्टर खर्च नपाएर उनीहरु मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा थला परिरहेको स्थानीय देशमाया गुरुङले बताइन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट, २६ साउन २०७३, ८।००
वि.सं.२०७३ साउन २६ बुधवार ११:०४ मा प्रकाशित
अघिल्लाे जनताको १ करोड ३ लाख कित्ता हकप्रद आउँदै, विक्री प्रबन्धकमा एनसिएम !
पछिल्लाे शिरीष गुरुङले रियो ओलम्किपमा राष्ट्रिय र्कीतिमान राखे !
यी दुई दर्जन कम्पनीका लगानीकर्ता बने मालामाल
वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १५:३५
काठमाडौं । सेयर बजारमा उछाल आउँदा दुई दर्जन कम्पनीको सेयर...
सेयर बजार १०४ अंकको बढ्दा लगानीकर्ता हर्षित, कारोबार रकममा सबैको चासो
वि.सं.२०७८ असोज ६ बुधवार १५:१९
काठमाडौं । सेयर बजारमा उछाल आएपनि कारोबार रकममा भने धेरै...